कमाइ भन्दा बढी खर्च भएर निराश हुनुहुन्छ ? अपनाउनुहोस् यी तरिका ! « Lokpath
२०७७, ७ माघ बुधबार ०९:३३
प्रकाशित मिति : २०७७, ७ माघ बुधबार ०९:३३
एजेन्सी । अहिले मानिसहरुको मुख्य समस्या भनेको रोजगारी, कमाइ हो । मानिसलाई कमाइले जति सताइरहेको छ त्योभन्दा बढी उनीहरुले त्यसलाई बचाउन नसकेर समस्यामा परेका छन्।
त्यसैले कतिपय मान्छेले भन्ने गर्छन् ‘मेरो हातमा त पैसा नै बच्दैन के गर्ने होला ?’
यदि तपाई पनि पैसा बचाउन नसकेर हैरान हुनुहुन्छ भने अपनाउनुहोस् यी उपाय :
तपाईले पैसा बचाउन चाहानुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला जाँगर चलाएर हरेक दिन गर्ने खर्चलाई टिप्ने बानी बसाल्नुहोस् । ‘एक हजारको नोट जब साटिन्छ, त्यो कहाँ जान्छ थाहा नै हुँदैन ।’ मानिसहरुले धेरै गर्ने गुनासोमा यो पनि पर्छ । मानिसहरुको हातमा पैसा भएपछि त्यो कतिबेला खर्च भयो भन्ने नै मानिसले थाहा पाउँदैनन्। दुध, चिया, पत्रिका, तरकारी, आदिमा दैनिक रुपमा खर्चका शीर्षकहरु हुन् । यस्ता सानासाना आवश्यकतामा खर्च भइरहेपनि मानिसहरुलाई यसको बारेमा थाहा भइरहेको हुँदैन ।
यो पढ्न छुटाउनु भयो कि? यी ४ समस्या भएका व्यक्तिले भुलेर पनि केरा नखानुहोस्
यस्तै घर किन्ने वा गाडी किन्ने बेलामा पनि यसको सबै मूल्य यति महिना भित्र तिर्नेछु भन्ने उद्देश्य निर्धारण गर्दा अन्य फजुल खर्च बचाउन सकिन्छ। यसरी खर्चको उद्देश्य बनाउँदा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दिर्घकालीन बनाउनु पर्छ । छोटो समयमा पुरा गर्ने उद्देश्यलाई अल्पकालीन उद्देश्यमा राख्ने, यस्तै केही लामो लाई मध्यकालीन र निकै लामो खालको उद्देश्यलाई दिर्घकालीन बनाउने जस्तै छोराछोरिको शिक्षा । यसको लागि अहिले देखिनै बचत गर्ने ।
हामी बिहानै उठेपछि चिया खानको लागि बाहिर निस्कन्छौं। यसले गर्दा अस्वभाविक रुपमा हाम्रो खर्च बढिरहेको हुन्छ । सकेसम्म घरमा नै बनाउन सकिने खानेकुरा घरमा नै खाने बानीले पनि बचत बढाउन सकिन्छ । हामी अल्छीले गर्दा खाना पनि बाहिर खाने वा खानाको सट्टा रेडिमेट वस्तु खाने गर्छौं । यस्ता खानेकुराले स्वास्थ्यमा असर पर्नुको साथै बचतमा पनि सहयोग मिल्छ ।